DEG DEG: Madaxweynaha Jubbaland oo ka carooday tallaabadii ay qaadeen Ciidanka Jubbaland ee Gedo | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA DEG DEG: Madaxweynaha Jubbaland oo ka carooday tallaabadii ay qaadeen Ciidanka Jubbaland...
DEG DEG: Madaxweynaha Jubbaland oo ka carooday tallaabadii ay qaadeen Ciidanka Jubbaland ee Gedo
Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa xalay shir deg deg ah isugu yeeray taliska Ciidanka Daraawiishta Maamulka Jubbaland,isagoona kala hadlay xaaladda amni ee deegaanada Jubbaland iyo arrinta ka soo cusboonaatay gobolka Gedo.
Muhiimadda kulanka Axmed Madoobe isugu yeeray Saraakiisha Ciidanka ayaa lagu sheegay iney tahay sidii warbixin kooban looga siin lahaa xaaladda Gobolka Gedo iyo Ciidanka Jubbaland ka goostay ee ku biiray Ciidanka Dowladda ee ku sugan gobolka Gedo.
Sida aan ku xogta ku helnay,madaxweynaha Jubbaland ayaa si aad ah kaga carooday tallaabada ay qaadeen Ciidankii Jubbaland ee ku sugnaa degmooyinka Baladxaawo iyo Doolow,kuwaasi oo isugu tagay degmada Luuq kuna dhawaaqay iney taageersan yihiin madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa dhaq dhaqaaq ay ku dooneyso iney guud ahaan kula wareegto deegaanada Gobolada Gedo ka wado halkaasi,waxaana gabi ahaanba meesha laga saaray ciidankii iyo Saraakiishii Jubbaland ee taageersanaa Axmed Madoobe.
Sidoo kale, Dowladda Federaalka oo kaashaneysa Ciidanka Itoobiya ayaa soo xiray mas’uuliyiin iyo Saraakiil ka tirsan maamulka Gobolka Gedo,kuwaasi oo si weyn u taageersanaa Axmed Madoobe madaxweynaha Jubbaland.
Khilaafka Dowladda Federaalka iyo Maamulka Jubbaland ayaa cirka isku sii shareeraya,iyadoo Beesha caalamka ay soo saartay digniin ku aadan sii socoshada khilaafka maamul goboleedyada gaar ahaan maamulka Jubbaland iyo Dowladda Dhexe kuna baaqday in la gaaro xal waara.
Wasiirka amniga maamulka Jubbaland C/rashiid Janan ayaa wali ku xiran magaalada Muqdisho,wuxuuna u xiran yahay madaxweynaha Soomaaliya,sida ay mas’uuliyiinta maamulka Jubbaland ay sheegeen.